chii chinonzi test oracles uye bvunzo heuristics?
Kuru Qa Ndeapi maedzo Oritions uye Bvunzo Heuristics?
Mukati mepasi rese rekuyedza uye kuvimbiswa kwemhando yepamusoro, isu tinowanzo kunzwa mazwi Ekuedza Oracle uye Bvunzo Heuristics, asi ndezvipi uye sei zvatingaite mumabasa edu ezuva nezuva ekuyedza?
Ngatione tsananguro yakanaka kwazvo yemayedzo ekuyedza uye bvunzo heuristics na Katrina Clokie
Fungidzira kuti ndinoda kudya magaka. Mapundu angu anochengeterwa muhari huru yegirazi. Mumba mangu, munhu wekupedzisira kudya magaka ndiye murume wangu. Akavhara chirongo zvakasimba. Pakuedza kwangu kwekutanga, ndinokundikana kuvhura.
Chii chandinoita zvinotevera?
Ini ndinotarisa kuti ndiri kutendeukira kuruboshwe kuti ndisunungure muvharo uye edza zvakare. Ipapo ini ndinotora tauro yetii kuti ndigadzire kubatisisa zvirinani kana ndichimonyorora muvharo wehari. Pakupedzisira, mukumwe kushushikana, ndinoenda ndotsvaga murume wangu. Anobudirira kuvhura chirongo.
Kana watarisana nechirongo chisingazovhurike pane zvinhu zvinoverengeka zvandinoziva kuti zvakakodzera kuyedzwa. Aya ndiwo magaba angu ekuvhura heuristics. Kana ini ndarairwa kuyedza software kunyorera pane zvinhu zvinoverengeka zvandinoziva kuti zvakakodzera kuyedzwa. Aya ndiwo maitiro angu ekuongorora.
Heuristics ingori ruzivo-rwakasarudzika matekiniki ekugadzirisa matambudziko, kudzidza, uye kuwanikwa. Iko kutsvaga kwakazara kusingagone, nzira dzekuchinjisa dzinoshandiswa kukurumidza maitiro ekutsvaga mhinduro inogutsa. Mienzaniso yenzira iyi inosanganisira kushandisa mutemo wechigunwe, fungidziro yakadzidza, kutonga kwakanaka, kana njere.
Ngatiti iwe uri kuyedza e-commerce webhusaiti. Mazhinji e-commerce mawebhusaiti 'peji rekutsvaga rine mafaera uye marongero mashandiro. Kuburikidza nemakore eruzivo rwekuyedza e-commerce mawebhusaiti, ndauya kuzodzidza kuti kusanganisa mafirita uye sarudzo dzemhando dzinogona kuratidza mabug anonakidza, sezvo izvi zvave zvirizvo nguva zhinji, saka, pane yangu inotevera chirongwa, ini intuitively ndichaedza zvimwe zviitiko zvine chekuita nekubatanidza mafirita uye sarudzo dzemhando.
Fungidzira kuti ndinoenda kunodya masikati neshamwari. Ini ndinopinda muresitorendi na12 pm neChina. Mushure meawa ndichinakirwa nekudya, ndinobva muresitorendi na1 masikati neChishanu. Kunyangwe ini ndasangana neawa rimwe chete, nyika yakandipoteredza yakachinja nezuva.
Ndinoziva sei kuti pane dambudziko pano?
Ini ndinogona kunge ndine notices dzinoverengeka pane yangu mbozhanhare kubva kushamwari uye mhuri vachifunga kuti ndiri kupi. Ndinogona kunge ndine tikiti yekupaka. Ndinogona kuona mumwe munhu achiverenga pepanhau reChishanu.
Pane nzira dzinoverengeka dzandinogona kuona kuti ndapunyuka zuva rehupenyu hwangu. Iyi inguva yangu yekufamba masvikiro. Pane nzira dzinoverengeka dzandinogona kuona kuti ndawana bug mune software application. Aya ndiwo mazwi angu ekuyedza.
Oracles ingori chirevo kana mashandiro matinoziva dambudziko. Bvunzo Oracles ndizvo zvinyowani zvako zvaunotarisirwa
Ngatiti iwe urikuyedza iko kwekuita kwewebhu webhusaiti. Kutanga, unogona kutarisa nezita rezita rakakodzera uye password inoshanda uye tarisira kuti uone kana redirect kune yangu account account kana kuendesa kune iyo peji pamberi pekupinda. Nekudaro, mushure mekunge iwe waedza kupinda uye iwe ukaona kukanganisa 500 kupindura, iwe ziva kuti chimwe chinhu chakanganisa.
Oracles uye Heuristics muAgile uye Yekuongorora Kwayedza
Ose mairi maOrthori Oracles uye Bvunzo Heuristics akakosha kana zvasvika pakuongorora kwekuyedza munzvimbo isingagone Kana isu tisina nguva yakakwana yekuvaka kesi dzekuyedza uye chigadzirwa chiri kuramba chichienderera mberi, hatigone kungovimba nezvakafanogadzirirwa zvinyorwa zvekuyedza, isu tinofanirwa kushandisa yedu domain ruzivo (Test Oracles) uye yapfuura yekuyedza chiitiko (Kwayedza Heuristics ) kukwanisa kukurumidza kugadzira uye kuita bvunzo panguva imwe chete uchidzidzawo nezvechigadzirwa.
Maitiro ekudzorerazve Samsung Kubhadhara pane yako Galaxy S7 kana S7 kumucheto
Aya mafoni emafoni eSmart achakodzera Android 12 kugadzirisa
OnePlus 5T vs Google Pixel 2 XL: kutanga tarisa
Heino & apos; nei T-Mobile 4G kumhanya kuchangobva kudonha, uye nei 4G uye 5G kumhanya kuchikwira munguva pfupi.
Sprint inotangisa BOGO dhizaini pane iPhone 7, asi iwe unogona chete kukwereta mafoni
Apple & apos; s iOS 13.6.1 yekuvandudza iri kunze uye inobvisa girini tint kubva pachiratidziri
Zvese zvitsva zveNetflix neHBO Chikunguru 2019 zvinoburitswa - mafirimu, nhepfenyuro dzeTV uye zvemukati zvirimo
Samsung Galaxy S7 isati uye mushure meiyo Android Nougat gadziriso: heino & apos; izvo zvakashandurwa & maapos